Guddiga-Wadajirka ah ee Diyaarinta Sharciga Doorashooyinka oo la kulmay Safiiradda Midowga Yurub iyo Talyaaniga – Kalfadhi
Guddiga-Wadajirka ah ee Diyaarinta Sharciga Doorashooyinka oo la kulmay Safiiradda Midowga Yurub iyo Talyaaniga
Guddiga-Wadajirka ah ee Diyaarinta Xeerarka Dhammaystirka Sharciga Doorashooyinka Qaranka ayaa gellinkii dambe ee shalay kulan la qaatay safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Belanga iyo safiirka dalka Talyaaniga ee Soomaaliya Alberto.
Safiiradda ayaa guddiga u ballan-qaaday in ay taageeri doonaan, madaama ay wadaan-shaqo muhiim u ah dalka Soomaaliya iyo doorashadiisa.
Shalay ayey aheyd markii madasha xisbiyada Qaran, oo soo saaray war Saxaafadeed ka kooban 14 qodob, ay kaga hadleen mowkhifkooda doorashada Qaran ee dalka Soomaaliya, taas oo la filayo in ay dhacdo sannadka dambe.
Qodobka ugu horreeya ee war-saxaafaddeedka, ayaa lagu sheegay in doorashada ay ku dhacdo wakhtigeeda, iyadoo aaney dhicin muddo kororsi. Maamul-gobolleedyada iyo dowladda dhexe ayey ugu baaqeen in ay dhaqaallo u qoondeeyaan doorashada soo socota.
Xildhibaan Maryan Maxamuud Ciise oo cambaareysay gabdho 4 jir iyo 3-jir ah oo la kufsaday
Sheekh Shariif iyo danjiraha Midowga Yurub oo kulmay